Lahatsoratra Mandona Bebe Kokoa … Any Trinidad Sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2017 11:27 GMT
Raha toa ka mampifantoka ny jeriny amin'ny fivoarana rehetra mivoaka avy ao Londra mikasika ny 7/7 ny gazety iraisam-pirenena lehibe, nanao asa tsara dia tsara ny tontolom-bolongana Karaibiàna tamin'ny fandrakofana ilay fipoahana omaly tao amin'ny tanànan'ny Seranan'i Espana, renivohitr'i Trinidad sy Tobago.
Manana podcast sy tafatafa skype niresahana momba ilay fipoahana ny Caribbean Free Radio. Nanomboka vondrona Flickr i Christopher Yee Mon, teratany Karaibiàna izay mamoaka lahatsoratra ho an'ny Subway Chronicles avy any New York, mba hanarahana ireo sary mifandraika amin'ilay fipoahana. Sirius, izay tangoron-trano vitsivitsy miala amin'ilay toerana nisy baomba tamin'ny fotoana nisehoan'ilay fipoahana, dia mitatitra androany fa ”nisy fandrahonana Baomba ihany koa tany amin'ny Trincity Mall omaly ary tao amin'ny Ministeran'ny Filaminam-Pirenena.” Manampy izy fa fandrahonana maro amin'ny baomba no tonga androany ary toa manampy amin'ny fanadihadiana ny FBI.
Taran Rampersad, izay mitsidika an'i Karaiba amin'izao fotoana izao, dia iray tamin'ireo mpitoraka blaogy voalohany namoaka lahatsoratra mikasika ilay fipoahana ary manana ny vaovao tsara indrindra ahitana lisitr'ireo tra-boina tamin'izany sy famintinana mifandraika tsara avy amin'ireo bilaogy manerana ny tontolom-bolongana.
Farany, manontany mikasika ny fifandraisany amin'i Al-Qaeda i Brian Maloney raha i Indira indray kosa milaza fa mety ho asan'ny eo an-toerana izany.